Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ပြန်လည် ခံစားမိသော နောင်လာမည့် နှစ် (၂၀)
အခုတစ်လော ကျနော်ချစ်ခင်တဲ့ အကိုတွေ အမတွေ ညီတွေ ညီမအိမ်တွေမှာ အသစ်တင်လို့ နက်မကောင်းတဲ့ ကြားက သွားလည်တော့ မကြီးမိုးချိုသင်းရဲ့ နောင်လာမည့် အနှစ်နှစ်ဆယ် တက်ဂ်ပိုစ့် လေးကိုပြန်တင်တာကို ပြန်ဖတ်ရတယ်… ဒီပိုစ့်လေးက မကြီးမိုးချိုသင်း ရေးကတည်းက သွားဖတ်ပြီးပြီး…
ပထမတစ်ခေါက် ဖတ်ပြီးကတည်း စဉ်းစားမိသွားတာ တစ်ခုရှိတယ်… ကိုယ်တိုင်က မိသားစု အဆင်ပြေဖို့ မိဘတွေ အဆင်ပြေဖို့ ကြိုးစားရုန်းကန် နေရတယ်ဆိုတော့ မိဘနဲ့ ပိုက်ဆံက လွဲပြီး ဘာကိုမှအာရုံ မထားမိဘူးလေ… ခုမကြီးချိုသင်းရဲ့ ပိုစ့်လေးကို ဖတ်လိုက်တော့ တုန်လှုပ်သွားတာလား.. ကြောက်သွားတာလားတော့ မပြောတတ်… ရေးထားတဲ့ စာပိုစ်နှစ်ခုထဲက တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ရင် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့အတူ အကိုကြီးတစ်ယောက် ကိုသတိရသွားတယ်…
၂၀၀၄- ခုနှစ် လောက်တုန်းက ပါ… ကျနော် အင်္ဂလန်ဗီဇာ ဖြေတာကျပြီး စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ အချိန်လောက်ကပေါ့… သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က မင်းဒီလို ဖြစ်နေမယ့် အတူတူ သံတမန်ရေးရာ သင်တန်း တက်ပါ… လျှောက်လွှာတင်ထားပါ… လျှောက်လွှာ အလှည့်ကျ ခေါ်တဲ့အထဲပါရင် တက်ပေါ့တဲ့… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဗဟုသုတ ရတယ်ပေါ့လေ… ကျနော်လဲ လျှောက်လွှာ သွားတင်တာပေါ့… အဲဒီမှာ အကိုကြီးတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံတယ်… သူနဲ့ကျနော်က လျှောက်လွှာ တင်တုန်းက တူတူ… ကျနော်က နှုတ်ချိုသူဆိုတော့ ခဏလေးမှာပဲ သူငယ်ချင်း အကိုဖြစ်သွားတယ်…
တနေ့ အပြင်မှာ ဆုံကျတော့ သူက ကျနော့်ကိုမေးတယ်… “ညီ... မင်း နိုင်ငံရေး ကိုဘယ်လိုမြင်လဲ”တဲ့… ကျနော်လဲ အရိုးရှင်းဆုံး ဖြေလိုက်တယ်… “အကို ကျနော် နိုင်ငံရေး စိတ်မဝင်စားဘူး”လို့… အဲလိုဖြေတော့ အဲဒီအကိုက ရယ်တယ်လေ… “မင်းဘာ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီသင်တန်း ကိုတက်ချင်တာလဲ”တဲ့လေ…
ကျနော်ကလဲ “မသိဘူး… အလုပ်လေး ဘာလေးများရရင် အထောက်အကူပြုမလား ထင်တာပဲ”လို့ ဖြေလိုက်တယ်… ဒါက အမှန်ပါပဲ… သူကရယ်ပြီး “ဒီမှာညီ… နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားလား ဆိုတာနိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့ မင်းကိုမြူဆွယ် နေတာမဟုတ်ဘူး… အကိုလဲ နိုင်ငံရေး သမားမဟုတ်ဘူး.. ဒါပေမယ့် နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးကိုချစ်တယ် လို့ ပြောလို့ရတယ်.. ကိုယ်နိုင်ငံမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာ နိုင်ငံသားတိုင်း သိထားသင့်တယ်… နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး အနေအထား အတွေးအခေါ် အပေါ်မူတည်ပြီး ဒီနိုင်ငံရဲ့ လူနေမှု အဆင့်အတန်းတွေ စီးပွားရေး လူမှုရေး ပညာရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ပြောင်းလဲနေတယ် ဆက်စပ်နေတယ် ဆိုတာသိထားရမယ်… မင်းတို့လို ငယ်ရွယ်တဲ့ သူတွေက နိုင်ငံရေး စိတ်မဝင်စားဘူးလို့ ပြောရင် အတင်းငြင်းနေရင် နောင်လာမယ့် အနာဂတ်မှာ ငါတို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဘယ်လိုရပ်တည်မလဲ”တဲ့… “မင်းဒီလို စိတ်မျိုးနဲ့ဆိုရင် မင်းလိုလူငယ်မျိုး အယောက်ပေါင်း မနည်း ရှိနေမယ်ဆိုရင် နောင်လာမယ့် အနာဂတ်အတွက် ရင်လေးမိတယ် ”ပြောတော့ ကျနော်တော်တော်လေး ရှက်ခဲ့မိပါတယ်…
ခုလဲကြည့် ကျနော့်ဒီပိုစ့်လေးကို ဖတ်ပြီး နောင်လာမယ့် အနာဂတ် ဆိုတာကြီးကို တွေးမိသွားတယ်… ကိုယ်တိုင်က နှစ်နှစ်ဆယ်ဆိုတဲ့ အနာဂတ်မှာ သေချင်သေနေမှာ… ခုချိန်ထိ ကိုယ့်မိသားစု အတွက် ရုန်းကန်နေရတော့ ဘာတွေ ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ ဆိုတာ မသိတဲ့ဘဝ (သိနေလဲ အခွင့်မသာတဲ့ဘဝ)… တစ်ခါတစ်လေတော့ မသိပဲရုန်းကန်နေရတဲ့ ဘဝနဲ့ စာရင် အတွေးအသစ် အမြင်သစ်တွေ နဲ့ ရုန်းကန်ကြည့်ချင်တယ်.. ဘယ်သူဘက်မှ မလိုက်ပဲ နိုင်ငံတော်ကြီးအတွက် ရိုးရိုးလေးပဲ စဉ်းစားကြည့်ကြမယ်…
လူတိုင်းက ကိုယ်မွေးတဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ချစ်ကြပါတယ်… ကိုယ်ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံတော်ကို ကိုယ်တိုင်ဘယ်လောက်ထိ ချစ်သလဲ… ဘာတွေ ဖြစ်စေချင်လဲ… ဘာလုပ်သင့်သလဲ ဆိုတာ ရိုးရိုးပဲတွေး “ရိုးရိုးကျင့် မြင့်မြင့်ကြံမယ်”… ဒါက ကိုယ်ကျိုးမဖက်တဲ့ နိုင်ငံတော် အနာဂတ်ကြီးအတွက်... တစ်ခုတော့ရှိတယ်… မကြီးချိုသင်း(မိုးချိုသင်း) ရေးခဲ့တဲ့ပိုစ့်လေးကို မဖတ်ခင် (ကမ္ဘာမကြေ) ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတော်သီချင်းကိုအသံထွက်ရုံ ဆိုကြည့်ပါ…
“တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ မသွေ
တို့ပြည်၊ တို့မြေ အကျိုးကို
အသံထွက်ဆိုကြည့် ပြီးရင် နိုင်ငံတော် ကိုချစ်တဲ့သူ တစ်ယောက်နေနဲ့ ဘယ်လိုခံစားမိသလဲ ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်ဖို့ မကြီးချိုသင်းရေးခဲ့တဲ့ ပထမအပိုစ်ကို ဖတ်ကြမယ် (ဒါတောင်စိတ်ကူးထဲက အနှစ်နှစ်ပါ)...
ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ ပြုံးနေမလား… သဘောကျလို့ ပျော်နေမလား…
ဒုတိယ အပိုစ်ကို ဆက်ဖတ်ကြည့်....
မျက်ရည်ဝဲသွားသလား… အံကြိတ်မိလား… တောက်ခေါက်မိလားပေါ့…. ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လိုမှ မခံစားရဖူးလား… သေချာတာကတော့ အပြင်ရောက်နေတဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေအဖို့ အမိနိုင်ငံတော်ကို ကြိုလွမ်းသွားမှာ အမှန်ပဲ…
ကိုယ်တိုင် တိုးတက်ချင်တဲ့စိတ် ရှိတဲ့သူတွေဟာ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို လဲတိုးတက်စေချင်ကြတယ်… ကျနော်တို့လို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ သူများနိုင်ငံ ရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ မခံချင်စိတ်ဝင်ပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံကို တိုးတက်စေချင်တယ် ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ ငြင်းလို့မရတဲ့ နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ ဖြစ်တည်မှု…
“တကယ်ဖြစ်ချင် တကယ်လုပ် အဟုတ်ဖြစ်ရမည်”တဲ့…
ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး… နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုတာထက် စိတ်ထဲထင်တာကို ရေးချမိတာပါ… နိုင်ငံရေး သမား မဟုတ်တဲ့ အတွက် အရေးအသားမှာ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါ… သေချာတာက အမကြီး မိုးချိုသင်း ရဲ့ ပိုစ့်လေးကိုဖတ်ပြီး ခံစားမိတာကို ချရေးကြည့်တာပါ… ပိုစ့်လေးကိုဖော်ပြခွင့် ပေးတဲ့ မကြီးမိုးချိုသင်းကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
Writer Sein Lyan Time 9:30 am
၁ မရတော့လည်း ၂ ပေါ့လေ :(
ခုလောလောဆယ် အဲတာဖတ်ပီး ကိုယ် ညံ့သေးကြောင်း ၀န်ခံရအုံးမယ်
နိုင်ငံရေး မသိတဲ့သူတွေထဲ ကိုယ်လဲ ပါတယ်။
(နောက်ထပ် ပြန်မန့်အုံးမယ် မျောက်မျောက်စိန်၊ ကောက်ကောက်စိန်ရေ... ရေးသူမှ အားမနာလို့ စိတ်မကောင်းအောင် မပြောနဲ့တော့)
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ..။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေ အနေနဲ့အခုလက်ရှိ တိုင်းပြည်အခြေအနေအရ သူများ တိုင်းပြည်တွေထက်(လွတ်လပ်ပြီးလူ့ အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ရှိသော နိုင်ငံများကို ဆိုလိုပါတယ်) နိုင်ငံရေး အသိစိတ်ဓာတ် ပိုရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆိုလိုချင်တာ နိုင်ငံရေး လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး..။ ဒါက တသီးပုဂ္ဂလ ဆန္ဒပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ နိုင်ငံရေးသမား မဟုတ်ပါဘူး..။ သို့ သော် အခြေအနေကြုံလာရင် ငါတို့ နိုင်ငံအတွက်ဆိုတာ အမြဲစဉ်းစားထားပြီး လုပ်ဆောင်နေခြင်းကို ဆိုလိုတာပါ။
နောင်လာမည့် အနှစ် (၂၀) ကို ပြန်လည်ခံစားသွားပါတယ်.. ကိုဖိုးစိန်ရေ...။
ဘာကြောင့်ရယ်မှန်းတော့ မသိဘူး မကြီးဝါ စပြီး ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ စိတ်ကူးယဉ် နောင် အနှစ် ၂၀ ဇာတ်လမ်းက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အသွင်ပြောင်းလာလိုက်တာ နိုင်ငံရေးလုံးလုံး ဖြစ်သွားတော့တယ် .. ဒါကလည်း လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်က ခံစားချက်ချင်း မတူတော့ ရင်ထဲမှာ တင်းကျပ်နေတာတွေ ပွင့်အံကျလာတဲ့ သဘောပါ ... ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံရေးဆိုတာကတော့ နိုင်ငံရေး သမား မဟုတ်လည်း သိထားသင့်တာတော့ မှန်ပါတယ် ... တိုးတက်ဖွင့်ဖြိုးတဲ့ နိုင်ငံတိုင်းက နိုင်ငံသားတော်တော်များများက နိုင်ငံရေးကို စိတ်မဝင်စားရင်တောင် နိုင်ငံရေး အကြောင်းတော့ အနဲနဲ့ အများ ကောင်းကောင်း သိကြပါတယ် ... ဘယ်ပါတီတွေ ဘယ်သူတွေ အုပ်ချုပ်တယ် ကြီးစိုးတယ် ဆိုတာတွေ ကျွန်တော်လည်း စိတ်မဝင်စားပါဘူး ... နိုင်ငံရေးကို အတွေးအမြင် ဗဟုသုတကို သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အရာတစ်ခုလို သဘောထားတဲ့ လူတစ်ယောက်မို့လို့ ဘယ်လိုလူတန်းစား ဘယ်လိုပါတီနိုင်ငံရေးတွေပဲ ပြောင်းပြောင်း ခေတ်ကောင်းတစ်ခုမှာ မြန်မာပြည်ကို ရှင်သန်စေချင်ပါတယ် ... ဒါကတော့ စိတ်ထဲက ရိုးရှင်းတဲ့ စကားပါ ..
ဘာပဲ ပြော ပြော
မြန်မာပြည်သားတိုင်း ရဲ့ 
အမြုတေ တစ် ခုပါ
ဗားရှင်း ၂ ကို တော့ ဘယ်သူ မှ
ခေတ်မီ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်သော
နိုင်ငံတော် ကြီးကို နောင်လာမည့် 
မြင်တွေ့ ရပါစေလို့ 
9 June 2009 at 10:05
နိုင်ငံရေးကို နားမလည်ပါဘူး...။ စိတ်လည်းမ၀င်စားဘူး။
နိုင်ငံတော်ရဲ့ အရေးဆိုရင်တော့ ... နောင်အနှစ်နှစ်ဆယ် ဆိုတာ ဝေးပါသေးတယ်..။
တကယ်ဖြစ်ချင် တကယ်လုပ် အဟုတ်ဖြစ်ရမှာပေါ့ ... တကယ်လုပ်ရင် အနှစ်နှစ်ဆယ်မပြောနဲ့ နှစ်နှစ်၊ နှစ်လနဲ့တင် ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရမယ်.. တစ်ယောက်အားနဲ့တော့ မဖြစ်ဘူးပေါ့လေ...။
မောင်လေးရေးတဲ့ အနှစ် ၂၀ ပထမပိုင်းလေးကိုပဲ နှစ်သက်မိတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးပြီး အဆင်ပြေ နေတာပဲ မြင်ချင်မိတယ်။ မတွေးမိတဲ့ နိုင်ငံရေး စိတ်ဓါတ်လေးက အခုမှ ပြန်ပေါ်လာတယ်။
9 June 2009 at 10:22
Very Nice Post...the author points out each and every new generation of Burma should have political sense while the original author, Moe Choe Thin, furnishes two options for readers to imagine for next twenty years. I've ever hadafriend, and I always remember what he said while we were in Uni. What he said is, "I don't interest in Political and even my house never buys any newspaper." I was shocked at what he said, and felt very painful at heart. Since even Uni student has such kind of close mindset, we can't imagine for those students who can't effort to study up to Uni level (I don't mean all and always bear in mind we can't judge someone's knowledge by current Burma education level.)I am always tired and painful whenever I think for our future leader to manage the current situation of Burma. In fact, the term "Political" isn’t barely political, and I wanna say that single word represents many kind of concern ofacertain country such as education, economic, health care, and I wanna add in environmental issue since climate change or extreme weather has been started in our country asaconsequence of long term negligence.
သိတ်ကောင်းတဲ့ ပို့ စ်လေးပဲ။
ဖိုးစိန်ပြောသလိုပါပဲလေ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အကြောင်း ခုနေ စိတ်မ၀င်းစားဘူး ဆိုရင် နောင်အနှစ် နှစ်ဆယ်မှာ ရင်လေးစရာပေါ့။
ပြိုင်တူတွန်းရင် ရွေ့ နိုင်ပါတယ်။
9 June 2009 at 11:10
ကိုဖိုးစိန်ရေးတာရော အစ်မမိုးချိုသင်းရေးတာရော လာဖတ်သွားပါတယ်၊ “ကမ္ဘာမကျေ“ သီချင်းကိုလဲ ပြန်ဆိုမိသွားတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတစ်မျိုး တင်ပါတယ်၊
အခုဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေကိုကတော့ အများစုက အားရမှာ မဟုတ်တာ အမှန်ပါပဲ၊ ကျမလဲ တော်ရုံတန်ရုံ နိုင်ငံရေးကို စိတ်မဝင်စားတဲ့ အထဲမှာ ပါပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်နိုင်ငံက အဖြစ်အပျက်တွေကိုတော့ ဂရုတစိုက်ကြည့်မိပြီးတော့ နောင်ကျရင် ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ အခြေအနေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်၊ အဲ့ဒီလို ဖြစ်လာဖို့လဲ တတ်နိုင်သလောက် ပံ့ပိုးနေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်၊ ဒါလဲ နိုင်ငံရေးအပိုင်းဆိုတာထက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအပိုင်းကို တွေးတာပါ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာပဲ ကိုယ်နေရင်လဲ လူတိုင်း ချောင်ချောင်လည်လည် လူတန်းစေ့ နေနိုင်မယ် ပညာသင်နိုင်မယ် ဆိုတာကို လိုလားပါတယ်၊ နိုင်ငံခြားသွားတယ်ဆိုတာကိုလဲ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ အဆင်မပြေလို့ သွားရတာထက် ပညာဆည်းပူးဖို့ အတွေ့အကြုံတိုးဖို့ ဆိုတာမျိုးဆို ပိုကောင်းမှာပါ၊
ရှည်သွားတယ် ထင်တယ်၊ စိတ်ထဲရှိတာ ရေးတာပါ၊
ကိုယ့်နိုင်ငံကို သူများတန်းတူ တိုးတက်စေချင်တာပဲ
ခုလိုသူများနိုင်ငံမှာ ပျော်လို့အလုပ်လာလုပ်သူ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမလဲ
တခုချင်းပြောသွားမယ်ဗျာနော... ဟုတ်တယ် ကိုဖိုးစိန် ဖနေ့ခေတ်လူငယ်တွေနိုင်ငံရေးစိတ် မဝင်စားကြတာတော့ အမှန်ပဲ။ ဒါကလဲ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အဲဒီလို နိုင်ငံရေး စိတ်မဝင်စားနိုင်အောင်လို့လဲ လုပ်ထားကြတာကိုးဗျ သူတို့ အပြစ်လဲ အမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လောက်ထိ ဆိုးဝါးသွားသလဲဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပုံကို ပြပြီး ဒါဘယ်သူလဲ မေးတာတောင် ဦးသန်ရွှေ တပည့်လားလို့ပြန်မမေးရင်ပဲ ကံကောင်း၊ ဒီလိုပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်က မိုက်ကိုင်ပြီး တရားဟောနေတဲ့ပုံပြတာကို အဆိုတော် အသစ်လားလို့ ပြန်မေးတာ တကယ့်အဖြစ်အပျက်ပါပဲ ဘယ်လောက်ထိရုပ်ဆိုးလဲဆိုရင် အဲဒီအဖြစ်အပျက်က ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တတိယနိုင်ငံသွားဖို့ မေးတော့ လူတယောက် အဲဒီလိုဖြေတာလို့ ဖတ်ဖူးလို့ပါ.. ကဲ မခက်ပေးဘူးလားဗျာ.....။
ထားပါတော့ ၁ အတိုင်းဖြစ်လာမယ်လို့ အာလုံး ယုံကြည်ထားကြတယ်ဗျ ဒါပေမဲ့ ထင်သာထင် မမြင်ရဘူးကျောင်းအမရေ ဆိုသလိုပါပဲဗျာ......................။
၂ကတော့ ယနေ့ခေတ်လူတွေရဲ့ ဘဝအမှန်ကို မီးမောင်းထိုးပြထားသလိုပါပဲဗျာ
ကျနော်တို့ ဘဝတွေက ရေစုန်မှီာမျောနေကြပြိဗျာ....။
နိုင်ငံရေးဆိုတာ နိုင်ငံသားတိုင်းနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ အခွင့်မရလို့ နေသာနေကြရတာ ရင်ထဲမှာတော့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို တိုးတက်စေချင်ပါတယ်။ အဝေးတစ်နေရာက မြင်တွေ့နေရတယ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ရင်နှင့်အမျှခံစား စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။ မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေက မြန်မာမှာ ဘာဖြစ်ပြန်ပြီနော်လို့ ပြောလိုက်ရင် မချိပြုံးလေးနဲ့ နားထောင်လို့ သတင်းလေးတွေကို ရှာဖွေဖတ်နေရတယ်။ မောင်လေး ဖိုးစိန်ပြောသလို ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမယ့် အရာနဲ့ ဖြစ်လာနိုင်ပါမလားလို့ စိုးရိမ်မိတယ်။ ဒီပိုစ့်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
9 June 2009 at 12:36
ပြိုင်တူတွန်းလျှင် ရွေ့နိုင်ပါသည် ..
ရွှံ့ ပေခံရပါမည် ...
ထိုင်နေပြီး ပြိုင်တူပြောနေလို့တော့ ....
ကျနော်လည်း ဘာရယ် ညာရယ် မဟုတ်ဘူး ၀င်ရေးကြည့်တာပါ ...
ဘ၀မှာ ကိုယ်တန်ဖိုးထားရာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေတာ သဘာဝ ပါပဲလေ ...
အခုလောလောဆယ်တော့ ကျနော့်မှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းရဲ့ အရေးကိုတောင် မနိုင်သေးလို့ ဒုက္ခတွေ ရောက်နေတာ ...
ကိုကြီးစိန် ငြိမ်းချမ်းပါစေဗျ ...
9 June 2009 at 13:12
နိုင်ငံရေးဆိုတာက လက်နက်ကိုင်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး စိတ်ကလေးတွေသာ ရှိနေရမယ်လို့ ကျနော်ကတော့ ယူဆပါတယ်။ ဆိုလိုတာက စစ်တိုက်တာတိုင်း နိုင်ငံရေးမဟုတ်သလို ဘေးက အော်နေတိုင်းလဲ နိုင်ငံရေး မဟုတ်ဘူးလို့ မြင်မိပါတယ်။ တိုင်းပြည်ကိုတကယ် ချစ်တဲ့စိတ်သာရှိမယ်ဆိုရင် အားလုံး သာယာစည်ပင်နေမှာ ကြာလှပါပြီ
မနက်မိုးလင်းချင်း ကော်ဖီသောက်ချင်ပေမယ့် ဈေးအရမ်းကြီးတယ်လို့ တွေးမိရင် ဒါလည်း နိုင်ငံရေးပဲ။
အဝေးရောက် ချစ်သူခင်သူဆီ ဖုန်းဆက်ချင်ပေမယ့် ဖုန်းခ ဈေးကြီးလွန်းတယ်လို့ တွေးမိရင် ဒါလည်း နိုင်ငံရေးပဲ။
ဒါပေမယ့် ဘယ်သူတက်တက် တက်တဲ့သူတွေစားမှာပဲ
ဖြစ်လို့ ဘယ်သူတက်တက် စိတ်မ၀င်စားတော့ပါ။
ကိုယ်ရမယ့်နေရာရောက်ပြီး ငါမစားပါဘူးကွာ ဆိုတဲ့သူ
ရှိမယ် မထင်ပါဘူး။ အနည်းနဲ့ အများတော့ အခွင့်အရေး
နိုင်ငံရေးဆိုပြီး ထိုင်အော်နေတာလောက်နဲ့တော့ မြန်မာ
နိုင်ငံရေး.နိုင်ငံရေးဆိုပြီး မအေ ညီမ မကြားသာအောင် ဆဲနေကြတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ၁၀၀၁ ဘလော့မှာ
တွေ့ရလေတော့ အလွန်အံ့သြ ရွံရှာသွားရပါတယ်..
အဲလို နိုင်ငံရေးသမားတွေ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေများ
ကွန်မန့်တွေကို ဖတ်ကြည်လိုက်တော့...တော်တော့ကို သေချာသွားတယ်...ကျွန်မတို့ နိုင်ငံလူဦးရေ ရဲ့ ရာခိုင် နှုန်း တော်တော်များများ ဟာ နိုင်ငံရေးဗဟုသုတ အရမ်းအားနည်းတယ် ဆိုတာပါပဲ...ဒါကြောင့်ပဲ ဗိုလ်ချုပ်က လွတ်လပ်ရေးရပြီရင်ဖြင့်စာရေး တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တော့မယ်လို့ပြောခဲ့တာနေမှာ...အကြောင်းအရာ တစ်ခုအပေါ်မှာတိကျစွာနားလည်ချင်းမရှိပဲ...သူတလူ ငါတမင်းဖြစ်လာမဲ့ အရေးကိုတွေးမိ ဟန်တူပါရဲ့...အမှန်မှာတော့ အမ မမိုးချိုက အမြွက် မျှဖွင့်ပြပြီး ပညာရေး နှင့် ကျန်းမာရေးအကြောင်းသာ ပြောပေမယ့်... ကျွန်မ စဉ်းစားမိသလောက်တော့ နိုင်ငံနှင်ပက်သက်နေ သမျှကိစ္စ အ၀၀ ဟာ နိုင်ငံ့ အရေးပါပဲ...နိုင်ငံတော်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအသီးသီး မှာတာဝန် ထမ်းဆောင်နေတဲ့ နိုင်ငံ့ ၀န်ထမ်း (ခေါင်းငြိမ့် ခေါင်းခါ ၀န်ထမ်းများကိုမဆိုလိုပါ) အသီးသီးဟာလည်း ၎င်းတို့ ကျွမ်းကျင်ရာ ပညာရပ်အသီးသီးဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း နိုင်ငံရေးမှာ တမျိုးတဖုံ ပါဝင်နေတာပါပဲ...နိုင်ငံရေးနားမလည်သော/စိတ်မ၀င် စားသောနိုင်ငံသားများရှိသည့် နိုင်ငံတွင် (ဥပမာ။ နေ၀င်းအစိုးရလက်ထက်) အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားမှ မိမိစိတ်တိုင်းကျခြယ်လှယ်ခွင့်ပိုမိုရ ရှိနိုင် သကဲ့သို့....အူဝဲ မှစ၍နိုင်ငံရေးအကြောင်း နားလည်နိုင်ခွင့်ပေးထားချင်းခံရသော နိုင်ငံသားများရှိ သည့်နိုင်ငံတွင်...တော်ရုံ တတ်သိပညာဖြင့် အုပ်ချုပ်၍မရနိင်ပေ...ယ္ခုချက်ချင်း သန်းရွှေ အာဏာလွှဲပေးသည့်တိုင်...ကသောင်းကနင်းဖြစ်နေသော နိုင်ငံ၊ စိတ်ဓာတ်ပျက်ပြားနေပြီဖြစ်သော နိုင်ငံသားများ၊ နိုင်ငံရေးဆိုသည်ကို မည်ကာမတ္တမျှသာသိ၍ စနစ်တခုကိုတည်ထောင်ရန်ကြိုးစားနေသော ပါတီဝင်များ ကိုဦးစီးရင်းဒေါ်စုခမျာ ရင်းကွဲနာကျရပေမည်...စာရေးဆရာကြီးဦအောင်းသင်းပြော သကဲ့သို့..."စွန့်တဲ့လူတွေစားမသွားလို့ မစွန့်တဲ့လူတွေစားနေရသည်" ဆိုသည့် အဖြစ်မျိုး မရောက်အောင် ၁၉ နှစ်ကျော်ကြာ အနစ်နာခံခဲ့ပြီဖြစ် သော ဒေါ်စု ကျန်းမာပကတိ ချမ်းသာအတိဖြင့် ၎င်းယုံကြည်ရာ ကျွန်မ တိုမျှော်မှန်းရာ စနစ်တခုကို နောင်လာမည့် နှစ် (၂၀) အတွင်းဖေါ်ဆောင်နိုင်စေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျှက်....
တကယ်လို့ သာ ကိုယ့်နိုင်ငံကောင်းရင် နိုင်ငံခြားဆိုတာ အလည်သဘော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အတွေ့ အကြုံလိုချင်လို့ ဘာသာစကားသင်ချင်လို့ ပဲ သွားကြမှာပေါ့။
ခုလို ဘယ်သူက မိဝေးဖဝေး နေမလဲ။
ပညာနဲ့ ကျနော် လုပ်စားတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ နေလို့ ဖြစ်ရင် ကိုယ့်နိုင်ငံမှာနေပြီး လုပ်မှာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ သူများတိုင်းပြည်နဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ ပညာသင်ခဲ့မိသူတွေ ပညာသင်ဖို့ ကို အခွင့်အရေး မရခဲ့သူတွေကတော့ ပင်ပင်ပန်းပန်းကို လုပ်စားနေရတာပါ။
လူတိုင်း သိက္ခာရှိတဲ့ စနစ်တခုရဖို့ ဝိုင်းလုပ်ရမှာပဲ။
သားသမီးကို ခိုးပြီး ကျွေးနေရတဲ့ မိဘနဲ့ 
သားသမီး ခိုးကျွေးတာ စားနေရတဲ့ မိဘ တွေလည်း မနည်းပါဘူးဗျာ။
လာပြောတာတွေမှန်လွန်းလို့ သက်ပြင်းတာ ချသွားမိပါတယ်...ဟင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ဒီပို့စ်က ဖိုးစိန်ရေးထားတာလေးတွေ ဖတ်ပြီး ကြည်နူးသွားတယ်။ ကိုယ်နိုင်တဲ့ဖက်က လုပ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်မိတယ် မောင်လေးရေ..
9 June 2009 at 18:29
အကိုလဲ မင်းတို့နဲ့အတူ ကမ္ဘာမကြေသီချင်း လိုက်ဆိုသကွ...
လူသားတိုင်းမှာ တန်းတူအခွင့်အရေးရှိတယ် ညီရေ...
လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့် ပြောဆိုခွင့်လဲရှိတယ်...
လူသားတိုင်းလွတ်လပ် ငြိမ်းချမ်းပါစေလို့ အကို မင်းတို့နဲကအတူ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကွာ...
ကိုယ်တိုင်က ကြုံတွေ့ နေရတာဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့ ချစ်တဲရွှေရောင်လွှမ်းတဲမြန်မာပြည်ကြီး အမြန်တိုးတက်စေချင်တာပဲ
ညီတို့ ဖက်ကလည်း မသိနားမလည်သေးတဲ့လူတွေကို ပိုသိအောင် လုပ်ပေးရင်ပိုကောင်းမလားလို့ တွေးမိပါတယ်
တစ်ဖက်စွန်းရောက်လူတွေ ၊ ခေါင်းထဲရိုက်ထည့်ထားရတဲ့လူတွေ ၊ မသိနားမလည်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေ
ဆိုလိုတာက သူပုန်နဲ့ စစ်သားကြားမှာမြေဇာပင်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေ
ညီက အဲ့ကြားထဲမှာကြီးလာတော့ ဘယ်သူ့ ကကောင်းတယ် ဆိုးတယ်ဆိုတာ ပိုသိတယ်ဗျ
ခုလိုအေးချမ်းနေတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း သူ့ တို့ ရွာပြောင်းရတော့ အဆင်မပြေမူတွေ ဘာသာစကားမတတ်ကျွမ်းမူတွေ က သူ့ တို့ ကိုဒုက္ခရောက်စေတယ်
နိုင်ငံတော်သီချင်းကို ပြန်လာ ရွတ်ရင်း
သွေးချင်း ညီအကိုများ စည်းလုံးခြင်းသည် အင်အား ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကိုပါ ထပ်လောင်း ညည်းမိတယ်။
အတွေး၊ အရေး ကောင်းတဲ့ ညီ့ကို ချီးကျူးပါတယ်ဗျာ။
ကော်မန့်မှာ ဆွေးနွေးကြတာတွေကလဲ အားရစရာ။
နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့သူကို ပြည်သူက ရွေးမှာပါ ကိုယ့်ညီ...
အဲလို ဆဲဆိုနေတဲ့သူက နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်ထိုက် မဖြစ်ထိုက်ကို ကိုယ့်ညီလို တာဝန်သိပြည်သူက စိတ်ဝင်တစားနဲ့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပေးပါမှ မှန်ကန်သင့်မြတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း တယောက် ပေါ်တော့မှာပေါ့...
အဲလိုဆဲနေတဲ့သူဟာလဲ အမှန်တရားနဲ့ လူ့အခွင့်ရေးကို တကယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ (ညီငယ်ရဲ့ အခေါ်အရ) နိုင်ငံရေးသမားစစ်စစ် ဟုတ်ပါရဲ့လားဆိုတာလဲ စဉ်းစားစရာပါ...
ပြည်သူပြည်သားတွေအပေါ်မှာ တကယ် စေတနာထား အနစ်နာခံနေကြတဲ့သူတွေကို ငဲ့ပြီး မစော်ကားထိုက်သူကို ကိုယ့်ညီက စော်ကားမိမှာစိုးလို့ အကိုက ပြောရတာပါ...
9 June 2009 at 23:07
ဖတ်ပြီးတော့ ရင်ထဲမှာ ပြည့်နေတယ်.. ပြောစရာတွေတော့ အများကြီးပဲ.. ဒါပေမယ့် စိန့်ကိုတော့ ပြောပြပြီးသားပါ
10 June 2009 at 15:33
နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်တော့လဲ နောက်တခါ ပြန်ခံစားရတာပဲ...
အမှန်ဟာ ဘယ်တော့မှ မမှားဘူး" တဲ့ညီရေ...
မြန်မာပြည်သားတွေနဲ့ နိုင်ငံတော်အပေါ်မှာ ထားတဲ့ တို့စေတနာက တနေ့ ပြန်အကျိုးပေးမှာပါကွာ....
ဘယ်သူကိုမှ နစ်နာစေချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုး တို့မှာမှ မရှိဘဲလေကွ နော်...
အမှန်တရားကို အမြင်မတူလို့ လက်မခံနိုင်ရင် လက်မခံနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းကို ချပြနိုင်ရမယ်.
လာလည်တဲ့ လူတွေ ငြိုငြင်မှာစိုးလို့ ပို့စ်ကို ဖြုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖိုးစိန်ကို စိတ်ဆိုးတယ်..
အဲဒါပဲလေ. မြန်မာပြည်မှာ လူကိုခင်လို့ မူကိုမကြိုက်ပဲ မျက်စိမှိတ်ထားတာတို့.. အကြောက်တရားနဲ့ မျက်စိမပွင့်တာတို့ကြောင့်.. အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ တိုင်းပြည်နစ်မွန်းဖို့ပဲ ရှိတယ်..
အမှန်တရားကို မကွယ်မဝှက်ထောက်ပြနိုင်မှ အမှားတွေ ကြာရှည်မတည်မြဲနိုင်မှာပေါ့..
အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် အမှားကြာ အမှန်ဖြစ်ပြီး ..လူဆိုးတွေ လူကောင်းယောင်ဆောင်လို့.. လောကကြီးပျက်စီးတော့မှာပေါ့...
မသိသေးတဲ့ သူတွေ သိအောင် .. သိပြီးသားလူတွေကို မမေ့အောင် ပြောပြနိုင်မှ လောကတာဝန်ကျေပြွန်လိမ့်မပေါ့...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခုလို ပို့စ်ကို ပြန်တင်လို့ ပိုချစ် ပိုလေးစားသွားပြီ.. အဟိ အဟိ..နောက်ကို အဲဒီလို မလုပ်ရဘူးနော်..
10 June 2009 at 21:28